पनि मात्र होइन खान भान्सा मा कम्तिमा कहिलेकाहीं जाने जो, तर मानिसहरूले अन्ततः सानो कुरा याद गर्न उपयोगी कुरा तयार। उदाहरणका लागि, उम्लिरहेको अन्डा गर्दा फ्लोट छैन, र तल झूट। कच्चा अन्डा पानी मा नाउहरु गर्दा उत्पन्न कि यसैले अस्पष्ट शक, छैन baseless छन्।
स्पष्ट खरीद संग उत्पादन को ताजगी निर्धारण को जटिलता। विशेष गरी अन्डा अक्सर बन्द, अपारदर्शी प्याकेज बेचिन्छन् जहाँ सुपरमार्केट, मा। हामी घर ल्याउन र खाना पकाउने सुरु गर्दा तर सबै स्पष्ट हुन्छ। तिनीहरूलाई तोड्न आवश्यक छ भने, चियरलिडरहरू निम्न सुविधाहरू छन्:
हाइड्रोजन sulfide गंध।
अण्डाको पहेंलो भाग एक पैन वा कचौरा बिच्छेद गर्दा तुरुन्तै सर्छ।
तर कसरी यसलाई भंग बिना अन्डा को ताजगी जाँच गर्न? बस पानी मा डुबाउनु। को अन्डा पानी मा नाउहरु भने, यो खराब वा बासी छ।
किन खराब अन्डा पप?
लोकप्रिय विश्वास विपरीत, को अन्डा छाप छैन। को खोल चल्ला सास फेर्न सक्ने pores छ। तर अक्सिजन साथै तिनीहरूलाई भित्र र सूक्ष्मजीवहरु भित्र पस्नु मार्फत। तिनीहरूलाई केही गतिविधि को परिणाम putrefactive प्रक्रियाहरू विकास र ग्याँसहरु जारी छन्। को अन्डा पानी मा floated भने, त्यसैले यसलाई पानी भन्दा हल्का छ ग्याँस को धेरै, संचित छ।
बाटो गरेर, भित्र क्षय हुनु र एउटा अप्रिय गन्ध कारण छ कि हानिकारक सूक्ष्मजीवहरु छैन भने पनि, पुरानो अन्डा अझै पनि निस्कनु हुनेछ। प्रोटिन र झिल्ली हावा को भुत्ते पक्ष संग बीच बिस्तारै accumulates। एउटै कारण लागि बासी अन्डा धेरै सजिलो छ।
खैर, यो यो पहेंलो भाग हावा कोठामा संग सम्पर्क छैन भनेर अण्डा, भुत्ते अन्त अप राख्न सिफारिस गरिएको छ किन छ। तिनीहरूले चाँडै deteriorate कि यसको उद्घाटन परिणाम रूपमा फ्रिज ढोका मा एक खण्ड तिनीहरूलाई राख्नु छैन भन्दा राम्रो छ।
को अन्डा नाउहरु पूर्ण छैनन् भने
पानी जोडतोडले जब अन्डा तुरुन्तै हामीलाई अगाडि धेरै ताजा उत्पादन हो तल जान्छ र तेर्सो स्थिति लिन्छ। तर समय, रासायनिक प्रक्रियाहरु मा निरन्तर भएको प्रोटिन र पहेंलो भाग को स्थिरता, तिनीहरूलाई थप तरल बनाउन परिवर्तन। तसर्थ, अन्डा को भुत्ते अन्त अप पानी मा floated भने, उहाँले एक हप्ताको बारेमा छ भन्ने हो। त्यसैले, यो अझै पनि त्यहाँ हुन सक्छ। यो एक ठाडो स्थिति लिन्छ भने, त्यो बारेमा 2-3 सप्ताह छ। एक महिना भन्दा बढी छ जुन अन्डा, पूर्ण उभर, र त्यहाँ हुन सक्दैन।
अण्डा गल्ति देखा छैन अन्डा तोड्न एक सानो नुन खाना पकाउने जब ज्ञान मान्छे थपिएका छन्। त्यसैले, यो तपाईं पहिलो नुन पानी थपियो भने, ताजगी को सही परिभाषा संदिग्ध छ कि उल्लेख गर्नुपर्छ। तथ्यलाई नुन को बढ्ने छ पानी घनत्व। को अन्डा पहिले podsolit गरिएको छ जो पानी, मा floated भने, यो आवश्यक यसलाई बासी छ भनेर भन्न गर्दैन। तर यो पनि नुन पानी मा, तेर्सो निहित भने, उत्पादन अझ् आनन्दित र हुन सक्दैन।
पसलमा मा अन्डा गुणस्तर कसरी निर्धारण
कुनै कुरा के हुन्छ, सबै तीन दर्जन अन्डा अचानक resurfaced किनयो यति पनि आफ्नो ताजगी खरीद गर्दा निर्धारण गर्न प्रयास गर्नुपर्छ।
हेर्नुहोस् समाप्ति मिति। यो उत्पादन को प्याकेजिङ्ग वर्ग निर्दिष्ट हुनुपर्छ भनेर मनमा सार्ने गर्नुपर्छ। त्यहाँ आहार अन्डा, 8 दिन भन्दा कुनै थप भण्डारण छन् जो छन्, तर त्यहाँ डाइनिंग कोठा (नीलो मुद्रण) हो, हामी सामान्यतया किन्न। आफ्नो अधिकतम आफ्नो जीवन - एक महिना। त्यहाँ कक्षा dolgohranyaschihsya छन्। तिनीहरूले बारेमा छ महिना लागि फ्रिज मा राखिएको गर्न सकिन्छ, तर शायद स्टोर मा पाइन्छन्।
सतह निरीक्षण। को खोल मैट र अलिकति कुनै न कुनै हुनुपर्छ। चिल्लो र चमकदार यो केवल बासी अन्डा को मामला मा छ।
आफ्नो हात मा अन्डा वजन। यो पुरानो छ भने, यो वजन धेरै हल्का हुनेछ।
को अन्डा हल्लाउनुहोस्। यो ताजा छ जब पहेंलो भाग भित्र सारियो छैन। त्यसैले तपाईं कि खोल छाडा कुरा मा महसुस छैन, र हल्लाइन्छ जब कुनै पनि ध्वनि सुन्न छैन।
खैर, अब, त्यसपछि हामी बाहिर आंकडा छौँ भइरहेको छ के, र पानी मा floated को अन्डा पूर्ण, यो बासी मतलब यदि त्यो पनि foul बुझ्न, र। तर, फ्लोट एक उसिनेर अन्डा, गल्ती कच्चा अर्को राख्नु हुन सक्छ, तर यस्तो भ्रम दुर्लभ छ। त्यसैले स्वास्थ्य मा सुरक्षित र बासी उत्पादन छोड्न छैन राम्रो छ।
मानव शरीर को लागि सोडा लाभ
तेल मलाईदार गुणस्तर कसरी निर्धारण गर्न खरीद गर्दा?
दुई को लागि एक अविस्मरणीय खाने
साइड होटल: पाँच तारा दुई पक्ष
नायलन dentures। प्रशंसापत्र
कसरी scrapbooking प्रविधी संग मुद्रा को लागि ओरिगेमी उपहार खाम बनाउन
शिशु सूत्र "hypoallergenic NAS 1": Pediatricians समीक्षा
टेरियर पश्चिम हाइल्यान्ड सेतो: विवरण र समीक्षा वर्ण कुकुरको खोर (फोटो)
परिदृश्य पार्क "ड्रीम गार्डन" (अबकन): वर्णन, विशेषताहरू र समीक्षाहरू
फेफडों देखि र तागत को सबै भन्दा राम्रो विरोधी-depressant
आगो सुरक्षा रिमाइन्डर: आधारभूत नियमहरू